Nabadoono iyo waxgarad ka socda Xeraale iyo Huurshe oo Cadaado lagu soo dhaweeyay “Sawirro” – Radio Muqdisho
Nabadoono iyo waxgarad ka socda Xeraale iyo Huurshe oo Cadaado lagu soo dhaweeyay “Sawirro”
Wafdiga oo ka koobnaa 30 xubnood ka badan oo isugu jira Aqoonyahano, Nabadoono, Culumaa’udiin, iyo waxgarad oo ka ambabaxay magaalooyinka Xeraale iyo Huurshe ayaa maanta gaaray magaalada Cadaado ee xarunta Ximan iyo Xeeb, halkaasi oo qaybaha bulshada iyo maamulku ku soo dhaweeyeen.
Wafdiga ayaa waxaa soo dhawayn u sameeyay wasiirka arrimaha bulshada iyo dib u heshiisiinta maamulka Ximan iyo Xeeb Cumar Maxamed Diiriye.
Caaqil Saadaq Yuusuf oo ka mid ahaa wafdiga ayaa sheegay inay ku faraxsanyihiin inay soo gaaraan Cadaado qabsoomidda shirka Mudug iyo Galgaduudn ay ka shaqaynayaan horumarintiisa.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa magaaalada Cadaado ku qulqulayay wufuud ka kala imaanaysay qaybo ka mid ah magaalooyinka Mudug iyo Galgaduud, kuwaas oo gogol xaar u ah shirka la filayo dhawaan inuu Cadaado ka furmo.
Isbitaalka Bula Burde Oo Qalab Caafimaad Lagu Wareejiyay “Sawirro”